Belarosiana mpikatroka nanjavona hita faty tany Okraina · Global Voices teny Malagasy
Nanokatra famotorana tamin'ny fahafatesan'i Vital Shyshou ny polisy Okrainiana
Voadika ny 05 Aogositra 2021 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, українська, Français, English
Belarosiana mpikatroka Vital Shyshou, sary avy amin'ny Belarusian House in Ukraine (BDU) ao amin'ny Telegram.
Hita faty tao akaikin'ny zaridaina akaikin'ny tranony ao Kyiv ilay Belarosiana mpikatroka Vital Shyshou, izay nanjavona tao Okraina tamin'ny 2 Aogositra, araka ny tatitra nataon'ny polisy.
Nandao an'i Belarus i Shyshou tamin'ny mihintsan-dravina 2020 noho ny tahotra hohenjehin'ny fanjakana tamin'ny fihetsiketseham-bahoaka ary nonina tao Kyiv, izay nanorenany sy namelomany ny Trano Belarosiana ao Okraina (BDU), fikambanana iray tsy mitady tombombarotra manohana ireo olompirenena Belarosiana mandositra ny fanenjehan'ny fitondran'i Aliaksandr Lukashenka ao Belarus.
Nitatitra ny mpiara-miasa amin'ilay mpikatroka tao amin'ny ranty iray tao amin'ny fantsona Telegram an'i BDU fa nanjavona i Shyshou ny marainan'ny 2 aogositra, raha nandeha nanao ny hazakazaka mahazatra azy izy ary “tsy niverina”. Araka ny fanambarana iray navoakan'ny polisy Okrainiana tamin'ny 3 Aogositra, taorian'ny fikarohana faobe, “hita nihantona androany tao amin'ny iray amin'ny zaridaina tao Kyiv izy, tsy lavitra ny trano fonenany”.
Naneho ny fiaraha-miory tamin'ny fianakavian'ilay mpikatroka ny mpitarika ny fanoherana Belarosiana Sviatlana Tsihanouskaya, izay miaina an-tsesitany ihany koa ao Lithuania.
Ketraka tamin'ny fandrenesam-baovao fahafatesan'ilay mpikatroka Belarosiana Vital Shyshou izay hita nihantona tao Kyiv. Miaraka amin'ny fianakaviany ny foko. Mampanahy ilay hoe mbola tsy voaaro ireo mandositra an'i Belarus.
Msaotra ny manampahefana 🇺🇦 aho amin'ny fanombohan'ny famotorana amin'ity raharaha ity.
Tamin'ny fanampim-baovao tao amin'ny fantsona Telegram, miahiahy ny BDU fa narahin'ny sampam-pitsikilovana Belarosiana maso i Shyshou rehefa tao Okraina ary efa nampitandermana izy amin'izay mety ho fihantsiana.
Naraha-maso i Vitalik. Nampitain'ny polisy izany zavamisy izany. Efa nampitandreman'ny loharanom-baovao teto an-toerana matetika izahay, sy ireo olonay any Belarus amin'izay mety ho fihantsiana, izay mety ho tonga hatramin'ny fakana an-keriny sy ny famonoana. Tsy nihontsona tamin'ireny fampitandremana ireny i Vitaliy sady noraisiny tamim-bazivazy izany, tamin'ny filazany fa mba hivoaka amin'ny sehatry ny vaovao ny BDU.
Yury Shchuchko, mpikatroka namana ao amin'ny BDU izay nandray anjara tamin'ny fitadiavana an'i Shyshou no niteny tamin'ny Current Time, fantsona fahitalavitra velomin'ny RFE/RL sy ny Voice of America, fa hita ho misy mangana voadaroka ny tavan'i Shyshou. Mihevitra i Shchuchko fa ireo manampahefanan'ny filaminam-panjakana (fitsikilovana hoy isika) Belarosiana (KGB) fantatra fa miasa ao Okraina no mety ho tompon'antoka ary nilazàny ny tranga “ho mahazatra fanaon'ny [KGB]”.
Tamin'ny fanambaràna nataony momba ny raharaha Shyshou, nilaza ny polisy Okrainiana fa “nanokatra raharahan-keloka bevava araka ny Andininy 115 amin'ny Fehezan-dalàna famaizana ao Okraina (famonoana olona efa nomanina mialoha) ary hanamarina ny endrika (fomba fijery) rehetra, ka ao anatin'izany ny endrika vono olona afenina ho toy ny famonoan-tena”.
Tsy zazavao amin'ny famoretana ireo mpiray tanindrazana any andafin-tsisitany ny fitondrana Belarosiana tarihan'i Aliaksandr Lukashenka. Tamin'ny 1 Aogositra 2021, nesorin'ny manampahefana belarosiana misahana ny fanatanjahantena tsy handray anjara amin'ny lalao olaimpika ilay athleta belarosiana Krystsina Tsimanouskaya ary nezahin'ireo mpitarika ny hampody azy amin'ny sidina tsy araka ny sitrapony. Nangataka ny fiarovan'ny polisy izy ary nahazo visa mahaolona avy amin'i Pôlônina avy eo.
Tamin'ny Mey 2021, hampidinin'i Belarus ny sidina Ryanair iray avy any Gresy ho any Lithoania nandalo ny faritr'habakabany ka nohazoniny ny mpanao gazety avy amin'ny fanoherana Raman Pratasevich, izay mbola nohazonina amin'ny trano voatokana.
Tamin'ny Jolay 2016, maty tamin'ny fiara voasesika baomba tao Kyiv ny bekotromaroholatra amin'ny fanaovan-gazety Belarosiana Pavel Sheremet, izay nanao fanadihadiana tamin'ny kolikoly any amin'ny sehatra faratampony amin'ny fahefana Belarosiana. Dimy taona izay no lasa fa mbola tsy lany ny fotoam-panenjehana [mg] ary mbola tsy nivaha ny raharaha (mbola tsy fantatra ny tompon'antoka). Nanao antso ny mpikatroka sy ny vondrona mpampita vaovao hisian'ny famotorana feno (lalina) sy mangarahara hamantarana izay tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'i Sheremet.